Is God Really Loving and Just? ဘုရားသခင်ဆိုတာ တကယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တရားမျှတခြင်းပေးပါသလား။ | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← ဂျဟန္နမ် ငရဲဘုံ Hell
အလ္လာဟ်က ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတဲ့အရှင် လား?ဒါမှမဟုတ် လက်စားချေတော်မူတဲ့ အရှင်လား? →
Is God Really Loving and Just? ဘုရားသခင်ဆိုတာ တကယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တရားမျှတခြင်းပေးပါသလား။
ဘုရားသခင်ဆိုတာ တကယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တရားမျှတခြင်းပေးပါသလား။
ဘုရားသခင်ဆိုတာ တကယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တရားမျှတခြင်းပေးပါသလား။ မေးခွန်း။ ဘုရား သခင် ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား၊ ဂရုဏာညှာတာမှုပေးသနားခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်း ရှိမှုတွေ ဖြစ်စေတယ်လို့ အစ္စလာမ်က အရေးဆိုတင်ပြပေးထားပါလျင် ၁)၊ ဘာကြောင့် အလ္လာဟ်က (ကျွန်တော်တို့) ဘဝ ကြမ်းတမ်း စေရတာပါလဲနဲ့ ၂)၊ မတူညီသော လူတန်းစားတွေအတွက် ဘာကြောင့် ခက်ခဲမှုအဆင့်မျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်စေရတာလဲ။ အဖြေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အလွန်တရာ ချစ်ခင်သနားတော်မူသော၊ မေတ္တာဂရုဏာ ထားတော်မူဆုံးသော ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အတွက် မေးခွန်းသည် မေးရန်ပင် ဝေးကွာလွန်းသည့်အနေမှာ ရှိပါသည်။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ ၁၁၄ သော အပိုဒ်ခွဲများတွင် ချွင်းချက်တစ်စူရာဟ်မှလွဲ ကျန်စူရာဟ်အားလုံး၏ အစတွင် “အလွန့်အလွန် ချစ်ခင်သနားတော်မူသော၊ များစွာသောဂရုဏာထားတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ့် နာမတော် စတင်ပါသည်” ဆိုသော စာတန်းငယ်ဖြင့် စတင်ဖော်ပြထားပါသည်။ အမှားဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း အကြောင်း စူရာဟ်နံပါတ် ၉ တွင် ဤသို့ နာမတော်ဖြင့်မစထားပဲ အလ္လာဟ်အရှင့်မြတ်အား အကြောက် ထားကြဖို့နဲ့ ရှိုင်တွန်မ် အဖျက်အင်အားစုထံ မလိုက်နာဖို့ သတိပေးနှိုးဆော်ချက်များ ပါရှိထားပါတယ်။ နောက်စူရာဟ်တစ်ပိုဒ်အတွင်းအကြောင်းအရာတွင် ဤ “အလွန့်အလွန် ချစ်ခင် သနား တော်မူသော၊ များစွာသောဂရုဏာထားတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ့် နာမတော် စတင်ပါသည်” ဆိုတဲ့ အကြောင်းထည့်သွင်းပါရှိထားပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ အလ္လာဟ်အရှင် နှင့် တရားမျှတခြင်းဆိုတာ ခွဲခြားလို့ မရနိုင်ပါ။ အစ္စလာမ်၏ ဘာသာရေးအခြေခံ ထားမှုသည် တရားမျှတ မှုအကြောင်းပင်။ ဒီ တရားမျှတခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သင့်တင့်စွာ၊ကောင်းစွာ ဆက်ဆံပြုမူကြရပါမယ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဖန်ဆင်းရှင်ကို ဖန်ဆင်းခံများက ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုလုပ်ကြဖို့ရယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် စူရာဟ် ၁၆း၉၀ မှာ မုချဧကန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိမိတို့ ဆွေမျိုးသား ချင်းများအပေါ် တရားမျှတမှုနဲ့ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံကြဖို့ တောင်းဆိုသည်၊ မတရားမှု၊ မမျှတမှု၊ ဆက်ဆံရေးဆိုးရွားမှုနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို တားမြစ်တယ်၊ အသင်တို့ကို သတိပေးနှိုးဆော် မှုလာလိမ့်မယ်လို့ အဆိုပြုထားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပေးပါတယ်။ မေးခွန်းရဲ.ပထမပိုင်းက မေးထားသည်မှာ- အလ္လာဟ်ရဲ.ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းပြီးနောက်မှာ ဘာကြောင့် သူက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘဝကို (သက်ရှင်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများ၊ ဖျားနာနေထိုင်မကောင်းမှုများ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ဒဏ်ကျရောက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများ စသည်) ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစေရတာလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး မေ့ထားလို့မရတဲ့အချက်ရှိပါတယ်။ ဒီ ယာယီသာဖြစ်တဲ့ ဘဝဟာ ဘုရားသခင်ရဲ. ဆုလာဒ် ကောင်း ခြင်းများနဲ့ သူရဲ. အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်မှုများ အကြား စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါ။ “ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အားဖြင့် ” ဆိုသည့်အချက်ကို လက်မက္ခံငြင်းပယ်ခြင်းသည် လုံးဝအကြောင်းအချက်မဲ့မှုနဲ့ မထုတ်ဖော်ပြမှုသာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ မည်သူမဆို မကြာခင်သော် လည်းကောင်း၊ နောက်မှသော်လည်းကောင်း သေဆုံးကြရမည်ဆိုသော အချက်အတွက် ဘုရား သခင် နှင့် သဘောမတူညီမှုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သူတစ်ယောက်မှ မအောင်နိုင်ပါ၊ ဘုရား
သခင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရနိုင်စရာမရှိပါ။ တခါတရံသော်လည်းကောင်း၊ အချိန်တိုတစ်ခု အတွင်း၌သော်လည်းကောင်း တစ်ဦးဦးသည် အောင်နိုင်သူဟု စိတ်ခံစားရသော်ငြားလည်း ထို ပိုတိုက်ခိုက်ယှဉ်ပြိုင်သူ ပိုပြီးဆုံးရှုံးရပါမယ်။ အကောင်းဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ရန်ကား သူ(ဘုရားသခင်)ကတိပေးထားတော်မူသော နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုသို့ သွားသည့်နည်း လမ်းဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်ကို (လက်နက်ချ) အညံ့ခံ၊ အရှုံးပေးခြင်းသာ။ ဒီထက်ပိုပါက မုချ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အဆုံးမသတ်နိုင်သော အဆုံးအရှုံးထိခိုက် နစ်နာမှုများလမ်းကြောင်း အောက်သို့ ပါသွားရပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်ခံဘဝအဖြစ် ဖြတ်သန်းခြင်းဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့တွေးတောခြင်းတို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ် စာမေးပွဲဝင် ရောက်ဖြေဆိုနေရခြင်း တနည်းဖြစ်လေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ.ကလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး က ချစ်ကြတယ်လေ၊ သူတို့ ကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သိပ်မချစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေကြောင့် စာခက်ခက်ခဲခဲလုပ်စေဖို့ အခိုင်အမာတောင်းဆိုလုပ်ခိုင်းတယ်လို့ မစဉ်းစားမိကြဘူးမဟုတ်ဘူးလား။ သူတို့ကလေးတွေ များစွာသော စာမေးပွဲတွေအတွက် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ခံစား ပင်ပန်းကြီး စွာကြိုးစား ကြရတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ကြရတာဟာ သူတို့အတွက် မကောင်းမှုဖြစ်စေ တယ်လို့မမြင်၊ ပိုသေချာခိုင်မာတဲ့ အာမခံချက်ရှိ ပညာတက်တွေဖြစ်ဖို့ ခြေလှမ်းအဆင့်တစ်ခု အဖြစ်သာမြင်ကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တချို.က ကလေးတွေကျောင်းစာမလုပ်လို့ ညံ့ဖျင်းမှာစိုးလို့ ကန်ကျောက်ရိုက်နှက် ဆုံးမကြတာလည်းရှိပါတယ်။ သင်ခန်းစာလိုက်နိုင်ဖို့၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ သူတို့ကလေးတွေကို ပိုကောင်းတဲ့ လူတော်လေးတွေဖြစ်လာဖို့ အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်ခြင်းမျိုးလုပ်ကြတာပါ။ ဘဝမှာ ဒီလို အပြစ်ပေး၊ အရိုက်ခံရတဲ့ အနေအထားက အလ္လာဟ်ဟာ အကောင်းဆုံးမျှတတော်မူသည်ဆိုသည့် အချက်ကို အမှတ်ရစေပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ လူတစ်ယောက်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုထက် ကျော်လွန်၍ စမ်းသပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကုရ်အာန် ၂း၂၈၆ မှာ မည်သည့်တစ်ဦးကိုမျှ အဆိုပါသူခံနိုင်ရည်ရှိမှုထက်ကျော်လွန်တဲ့ ဝန်ပိခြင်းမျိုး ပေးမထားပါ ဟု အသိပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ. (ကိစ္စတစ်ခုတိုင်းအတွက်)အခိုင်အမာရှိမှုနဲ့ ဘဝမှာ ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြံ.ခိုင်မှုတို့အတွက် ခွန်အားရဖို့ ကူညီပေးပါရန် အလ္လာဟ်ထံမှ အားမွေးမြူရရှိရန် တောင်းခံရပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေအတွက် ရင်ဆိုင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းကြဖို့ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂း၂၈၆ မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်ပြုမှုတွေ ရန်တန့်နိုင်ဖို့နဲ့ အပြစ်ပြုခဲ့မှုများအတွက် ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးပါရန်လည်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ အကာအကွယ်ယူ အားထားယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝဟာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ လိုအပ်ပါက ပေးဆပ်မှုများရှိတယ် ဆိုသော်လည်း ကုရ်အာန်က ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်းအတွက် အခက်အခဲများပြုလုပ်ဖို့ မသင်ပြထားပါဘူး။ ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး ကုရ်အာန်မှာ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ခက်ခဲမှုဖြစ်စေလိုခြင်းမဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့အပေါ် သူ့ရဲ.မျက်နှာသာပေးမှု ပြီးဆုံးစေဖို့သာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ကြေငြာပေးထားပါတယ်။ ဘာသာရေးကိစ္စမှာပင် ခက်ခဲမှုနဲ့ လေးလံမှုအတွက် မထုတ်ပြန်ထားပါဘူး။ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်သခင်က ဘာသာရေးရာအမှုထမ်း ကိစ္စများတွင် လေးလံခြင်း၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေခြင်းမျိုး ကျွန်တော်တို့အား မဖြစ်စေဖို့ သတိပေးထားကြောင်း အနတ်စ်ဗင်မာလစ်က ဆင့်ပြန်ပြောဆိုထားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆဟီးဒ်ဘူခါရီ အတွဲ၈ အမှတ် ၁၄၆။ ဘာသာရေးသမားဖြစ်ခြင်းအတွက် အများဆုံး ခံယူချက်အမှား ဖြစ်ကြတဲ့အချက်ကတော့ ဘာသာရေးသမားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်စေဖို့ အခက်ဆုံးကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းများသာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမယ် လို့ထင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုမူခြင်းဟာ အစ္စလာမ်အရ မမှန်ပါ။ အာအေရှာဟ်သခင်မ ဆင့်ပြန်ထားခဲ့သော တမန်တော်မြတ်၏ နည်းလမ်းတစ်ခုတွင် “တမန်တော်မြတ်ထံ ကိစ္စတစ်ခုအတွက် ၂ မျိုးနည်းလမ်းပေးလာတိုင်း အဲဒီ ၂ ခုထဲက ပိုလွယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသာ အပြစ်မဖြစ်သရွေ. ရွေးချယ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပင်မဲ့ ဒါဟာ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသာ အဲဒီနည်းလမ်းက ဝေးဝေးမှာပဲနေတယ်။” ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆဟီးဒ်ဘူခါရီ အတွဲ၈ အမှတ် ၇၇၇။ မေးခွန်းရဲ. ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ အလ္လာဟ်က မတူညီသော လူတန်းစားတွေအတွက် ဘာကြောင့် ခက်ခဲမှုအဆင့်မျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်စေရတာလဲ ဆိုတာအတွက်ကတော့ အလ္လာဟ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရိုးသား၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြစ်စေရန် လိုလားတော်မူတာပါ။ မတူညီသော တစ်ယောက်ချင်းတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ နားလည်နိုင်မှုအဆင့်ဆင့်ရှိပြီး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့ စိတ်ခံစားမြဲမြံမှုတွေလည်း မတူညီနိုင်ပါ။ တစ်ယောက်ချင်းတိုင်းဟာ ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နေမှု အဆင့်အတိုင်း စမ်းသပ်ခံရသင့်တယ်ဆိုတာဟာ တရားမျှတခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်က ရုပ်ပိုင်း၊နာမ်ပိုင်း အားနည်းသူဖြစ်ပါက စမ်းသပ်ခံရမှုက ရုပ်ပိုင်း၊နာမ်ပိုင်း အားကောင်းသူအတွက် စမ်းသပ်မှုနဲ့ယှဉ်တဲ့အခါ ပိုလွယ်ကူမယ်လို့ မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကြီးစွာစမ်းသပ်ခံရလေ ဘုရားသခင်အလိုတော်အားဖြင့် အဆင့်မြင့်မြင့်ရလေဆိုတာသိဖို့ ဘဝရဲ.ပြင်းထန်ခါးသည်းလှတဲ့စမ်းသပ်မှု အောက်က တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်နှစ်သိမ့်ပေး၊ စိတ်အေးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါလှပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မှုကို သည်းခံဇွဲရှိတယ်ဆိုပါက ပိုပြီးအဆင့်မြင့်အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်မှာ ကြီးမားတဲ့စိမ်ခေါ်ခံရမှုကိုပင် ရင်ဆိုင်နိုင်ကာ အဆင့်မြင့်မြင့် ဆုလာဘ်တွေ ရလာနိုင်ခြင်း ဖြစ်လာဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါမယ်။ လွယ်ကူတဲ့ရိုးရိုးဥပမာကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ မဟာဘွဲ. သို့မဟုတ် ဒေါက်တာဘွဲ့ (Ph.D) ယူဖို့လုပ်နေရခြင်းမှာ ဒီပလိုမာ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးဘွဲ့တစ်ခုယူဖို့လုပ်နေခြင်းထက် အားထုတ်ကြိုးစားရမှုနဲ့ ပေးဆပ်လုပ်ကိုင်ရမှုတွေ ပိုလိုအပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဘွဲ. သို့မဟုတ် ဒေါက်တာဘွဲ့ (Ph.D) ရထားပြီးသူဟာ ဒီပလိုမာ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးဘွဲ့ရထားသူထက် ပိုမြင့်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အဆင့်ရာထူးရပြီး လုပ်ခနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေလည်း ပိုလွယ်ကူကောင်းမွန်စွာရမှာပဲဖြစ်တဲ့ နမူနာလေ။ ပိုပြင်းထန်ခံစားရတဲ့ စမ်းသပ်မှုကြုံရလေ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်ရလေ လို့ဆိုထားတဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် မေးခွန်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ စမ်းသပ်ခံရမှု အစစ်လား၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးရမှုလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလို ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းမျိုးအတွက် တုန်ပြန်မှုအနေနဲ့ အစ္စလာမ်မှာ ပြဆိုထားတာကို သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အသက်ရှင်သန်နေရဆဲ၊ နေရစဉ်တလျှောက် ဘုရားသခင်မြတ်ထံမှာ (လက်နတ်ချ)အရှုံးပေး၊ တောင်းပန်ဝန်ချဖို့ အချိန်ရသေးတယ်ဆိုတာပါ။ ဒါကြောင့် စမ်းသပ်မှုကြောင့်လား၊ အပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ဆိုတာ သိပ်ပြီး အရေးမကြီးတော့ဘူးဖြစ်တယ်လေ။ အရေးကြီးတာကတော့ ဒီဖြစ်ရပ် အပေါ်ကနေ လေ့လာ၊ သိပ်နောက်မကျသွားခင် ကိုယ့်ဘဝကို ပြုပြင်ပါ။
ဘာသာပြန်။ မြတ်ဇေယျ မှတ်ချက်။ မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် The Criteria – 1st issue of June 2008 သတင်းစာ၏ စာမျက်နှာ ၁၄ ပါ Ask Brother Shah ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်စွာ ဘာသာပြန် ဆိုခြငဖြစ်သည်။